Khadiija Diiriye “doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto, waan ka fiirsaneynaa sidii guddiga doorashada….” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Khadiija Diiriye “doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto, waan ka...
Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya ayaa ka hadashay dooda sharciga doorashooyinka oo haatan horyaala golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxa ay sheegtay in dalka aaney ka dhcii Karin sanadka soo socda doorasho qof iyo cod ah, iyadoo doodeeda sal uga dhigtay inaan jirin tira koob sax ah, sidoo kalena aan la tagi Karin deegaanada qaar oo ay joogaan dadkii codadka dhiiban lahaa.
Wasiir Khadiija ayaa dhaliil xooggan u jeedisay Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Qaranka, iyadoo ku eedeysay iney isku dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen guud ahaan howsha ah socodsiinta doorashada, xili Baarlamaankan 10-aad aanu wali waqtigiisa dhamaan.
Waxa ay tilmaamtay iney ka fiirsan doonaan sidii ay ugu aamini lahaayeen doorashooyinka, iyadoo sabab uga dhigtay iney la kala safanayaan dhinacyada ka qeyb galaya doorashada soo socota ee dhaceysa 2020/21.
Khadiija Maxamed Diiriye oo sii hadleysa ayaa dhinaca kale sheegtay iney jiraan howlo ay eheyd iney qabato dowladdan mudadii Saddexda sano ee jirtay oo aan wali la qaban, iyadoo Baarlamaanka ku sifeysay iney yihiin Maroodi aan awoodiisa la tusin.
Previous articleBooliska oo war ka soo saaray Khasaaraha weerarkii Hotel SYL
Next articleSarkaal ka tirsanaa ilaalada Madaxtooyada oo la xaqiijiyey inuu ku dhintay weerarkii SYL